Archive du 20180627
Antananarivo Hitokona ny taksibe anio
Nanamafy ny fikambanan’ny koperativa miasa eto an-drenivohitra na ny UCTU tamin’ny alalan’ny filohany Randrianatoandro Lovasoa Angelo, ny alatsinainy teo, fa ho raikitra ny fitokonana anio alarobia 27 jona.
Malagasy tia tanindrazana Mbola misy antenaina, hoy ny antoko Maitso
Raha mbola misy koa ny maitso dia tsy ho foana ny fanantenana, hoy ny filohan’ny antoko politika Maitso, Alexandre Georget, raha naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny fisiana na tsia ireo malagasy tia tanindrazana ankehitriny.
Brunel Razafitsiandraofa « Nanatanteraka ny didin’ny HCC izahay »
Taorian’ny fanazavan’ny depioten’ny boriborintany faha V, Naivo Raholdina,
Rajaonarimampianina “Firenena reraka no noraisiko tamin’ny 2014”
Nitanisa ny lalana nodiavin`ny firenena tao anatin`ny 58 taona ny filoha omaly. Mbola nailiny tamin`ny teo aloha hatrany ny tsy fahombiazana ary toa omaly tsy niova ny lahateny nataony.
Andry Rajoelina Manava-tena sy manao sain-jaza
Samy tonga niatrika ny matso lehibe nanamarihana ny fetin’ny fahaleovantena sy ny fetin’ny foloalindahy tetsy Mahamasina avokoa ireo filoham-pirenena teo aloha, dia i Didier Ratsiraka sy i Marc Ravalomanana,
Mpitolon’ny 13 mey Nankalazaina teo an-kianja ny fetim-pirenena
Fety aman-danonana no nentin’ny mpitari-tolona sy ny vahoakan’ny 13 mey nanamarihana ny asaramanitra dia ny fetim-pirenena nanomboka ny tolakandron’ny alatsinainy 25 jona teo.
Marc Ramiaranjatovo Mitaky ny hanemorana ny fifidianana amin’ny taona 2019
Mitaky ny hanemorana ny fifidianana amin’ny taona 2019 Atoa Marc Ramiaranjatovo, Ben’ny tanànan’ny kaominina Alasora.
Alakamisy Fenoarivo Nampianarina momba ny fitiavan-tanindrazana ny mponina
Nampianarina momba ny fitiavan-tanindrazana ireo mponina eny Alakamisy Fenoarivo, distrikan'Antananarivo Atsimondrano. Tamin'ny alalan'ny lanonana lehibe notanterahina teny an-toerana omaly no nanatontosana izany.
Fikambanana Madagasikara Mandroso Miaraka « Hanabe sy hamalifaly vahoaka »
Fianakaviana sahirana maherin’ny 300 isa avy amin’ny boriborintany 6 teto Antananarivo Renivohitra, kaominina Anosizato Andrefana ary
Fahaleovantena tena izy sa sarintsariny ihany ? Fanontaniana nipetraka hatrizay ka mandrak'androany Mbola botom-bazaha ve sa efa mahavita tena ? Malagasy anarana fotsiny fa vazaha no tompon'ny harena.
Tafika Malagasy Natsangana ny Hery Vaovao
Mirongatra tanteraka ny asan-dahalo amin`izao fotoana ary mitombo isa hatrany izy ireo sady manana fitaovana avokoa.
Tondro ho an’ny fifamoivoizana Mametraka sy manavao ireo tondro ny CUA
Notanterahina nanomboka ny faran’ny volana mey ka hatramin’ity volana jona ity ny « marquage au sol » iandraiketan’ny Sampandraharaha misahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena eto an-drenivohitra na DTMU (Direction des Transport et de la Mobilité Urbaine) eo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo mba handrindrana ny fifamezivezen’ny mpandeha an-tongotra sy ireo fiara.
Essam El Hadary - Egypte Mbola nahatohana penalty teo amin’ny faha-45 taonany
Teo amin’ny faha-45 taona sy 161 andro niainany dia mbola nahatohana ny penalty azon’i Arabie Saoudite teo amin’ny 41’ ka nodakan’i Fahad Al-Muwallad ihany ilay mpiandry harato Egypsiana Essam El-Hadary nataon’ny “Pharaons”
Mondial 2018 – Dingan’ny 1/8 ndalana Hifandona i France sy Argentine
Ny sabotsy 30 jolay ho avy izao no hiditra amin’ny lalao ampahavalon-dalana ny fiadiana ny amboara eran-tany amin’ny baolina kitra any Rosia ka hanokatra izany ny fihaonan’i Frantsa sy Argentine.
Tsy mbola foana hatreto ny fiheverana sy fanantenana fa taom-pifidianana ity 2018 ity, raha ny kabarin’ny filoham-pirenena omaly.
Fako eto Antananarivo Azo avadika angovo ampiasain’ny isan-tokantrano
Iaraha-mahita ny loto eto Antananarivo Renivohitra sy manerana an’i Madagasikara.
FIRAISANA FAHA IV
Nankalaza ny asaramanitra tamin’ny alalan’ny fanomezana vary sy harendrina ny tao amin’ny firaisana fahefatra. Nomena valopy tsirairay koa ireo sekretera sy mpitam-bola. Nambaran’ny depiote izay nizara ny valopy fa mbola nanatitra ny depiote solon’ireo lasa minisitra izy ka niala tsiny tamin’ny fahatarana.
Kaominina Ampitatafika 1km sisa ny lalana tsy vita
1 km sisa ny lalana tsy vita, fampanantenana nataon’ny Ben’ny tanànan’Ampitatafika Rado Ramparaoelina ho an’ireo vahoaka nifidy azy raha 22 km no totalin’izy rehetra.
Lalao Ravalomanana Nizara vatsim-panahy sy vatsin’aina
Noho ny asaramanitra, dia nisy ny vondrom-bavaka izay efa fanao tarihan’ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana, izay niraisan’ny Boriborintany 6 eto Antananarivo Renivohitra.
Tantsaha any Arivonimamo Nahazo torohevitra momba ny fiahiana ara-tsosialy avy amin’ny CNaPS
Iray amin’ireo distrika be mponina amin’ireo telo mandrafitra ny faritr’Itasy ny distrikan’Arivonimamo.